DLL-File.com Fixer 2.0.72.1862 Full Version ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » System Tools » DLL-File.com Fixer 2.0.72.1862 Full Version
By နေမင်းမောင်2:47 AM19 comments
ကျွန်တော် အခုတစ်လော စာသိပ်မရေးဖြစ်သေးတာ ခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်အခု တောင်းထားတဲ့ Software လေးတွေကို အဆင်ပြေတာနဲ့ တင်တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲလေးတွေဖြစ်တဲ့ .dll errors လေးတွေပါ။ အခုလက်ရှိတော်တော်များများ Game Install လုပ်တဲ့အချိန်တွေနဲ့ အခြား Software တွေကို Install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့ Errors လေးတွေအတွက်ပါ။ အရှေ့မှာတုန်းက တင်ပေးခဲ့တဲ့ လင့်ခ်လေးတွေက သေနေလောက်ပါပြီ။ အဲ့ဒါကြောင့် အခု Update လုပ်ပေးပြီး ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ .dll ဖိုင်လေးတွေကိုလည်း Download ဆွဲပြီး C:\_Windows\_System32 ထဲကိုကူးထည့်ပေးရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဒီကောင်လေးကိုသုံးပြီး ကျွန်တော်တို့ .dll errors လေးတွေကို ဖြေရှင်းကြရအောင်ဗျာ။ အစ်ကိုတစ်ယောက်လည်း တောင်းထားတာလေးရှိတာနဲ့ Full Version လေးရှာပြီးတင်ပေးလိုက် တာပါ။ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ Crack ဖိုင်လေးကို Install လုပ်ထားတဲ့ Folder လေးထဲကိုကူးထည့်ပေးပြီး Run ပေးပြီး Patch ဖြေပေးလိုက်ရင် Full Version ရပါပြီ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 5.3 MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ အစ်ကိုတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ Error တစ်ခုကိုပါတွဲပြီး ဖြေရှင်းနည်းကိုပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာဆက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
အစ်ကိုတစ်ယောက်လိုနေတဲ့ Dll ဖိုင် error ပုံစံက အောက်မှာပြပေးထားပါတယ်။
ဒီ Error လေးကို ကျွန်တော်တို့ Dll Fixer လေးနဲ့ ဖြေရှင်းပါ့မယ်။ အရင်ဆုံး Scan ဖတ်ပေးပြီး Errors လေးတွေကို Fix ပေးလိုက်ပါ.။ နောက်တစ်ဆင့်ကိုပဲ ကျွန်တော်ပြပါ့မယ်။ ပုံမှာကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်နေတဲ့ Dll File ကို ထပ်ပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ ရိုက်ရှာပြီးရင် Download လုပ်လိုက်ပါ။ ဆက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
ဒါလေးကတော့ Dll File Down နေတဲ့ပုံပါ.။ ပြီးရင် တစ်ခါတည်း Install လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီကနေမရှာချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ Dll File လေးကိုဒေါင်းပြီး C:\_Windows\_System32 ထဲမှာထည့်ပေးရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထား ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ် လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ Patch ဖိုင်ကို အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော် အခုဒုတိယတစ်ကြိမ် ထပ် Run ထားတဲ့ ပုံကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Antivirus တွေကို ခဏလောက်ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ ဥပမာ Microsoft Security Essential မျိုးတွေဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Patch ဖိုင်တွေကို ကိုက်ပစ်တတ်ပါတယ်။ Patch ဖိုင်လေးကို Install လုပ်ထားတဲ့ ဖိုလ်ဒါလေးထဲကို ကူးထည့်ပေးပြီး Patch ဖြည်ပေးလိုက်ရင် Full Version လေးဖြစ်ပါပြီ.။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Anonymous December 17, 2011 at 10:43 AM
i did not see crack file and i cant patch. if i patch , it showed no success.
really appreciate bro..
chan myat oo December 19, 2011 at 6:22 AM
အကို patch ဖိုင်က broken ဖြစ်နေတဲ့ပုံပဲ
antivirus ပိတ်ပြီးစမ်းဖို့လိုလား အကို
ဟုတ်တယ်ဗျာ အဆင်မပြေဘူး တင်ပေးပါဦး။
aunglaykhaing April 29, 2012 at 9:55 PM
နေမင်းမောင် January 15, 2013 at 10:26 AM
ကျွန်တော်သေချာပြန်စစ်ပြီး ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Antivirus တွေကိုတော့ ခဏလောက်ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ Patch ဖြည်တဲ့ပုံစံလေးကိုပါထည့်ပြီး ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေ :)
အစ်ကိုညီပြောသလိုလုပ်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးinstall လုပ်တယ်။ပြီးတော့ patch လည်းချိုးတာပါပဲ။ညီပြထားတယ့်ပုံထဲကလို Patch က complete ဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့် scan စစ်ပြီး fix error လုပ်တယ့်အချိန်မှာ ၀ယ်ခိုင်းနေတယ်။fix လုပ်လို့ မရဘူး။ full version မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ် ဘာဖြစ်လို့ လဲမသိဘူး။photoshop cs3 ကတော့လုံးဝသွင်းလို့ မရဘူး။တစ်ခြားစက်ကိုသွင်းကြည့်တော့လည်းညီလေးကိုမေးတယ့် error ပဲဖြစ်နေတယ်။စက်ကဖြစ်တာလား အခွေကဖြစ်တာလားကိုမသိပါဘူး။ညီလေးမှာ photoshop full version လေးရှိရင်တင်ပေးပါအုံး။ကျေးဇူးတင်လျက်။
လူဆိုးကောင်လေး January 21, 2013 at 9:56 AM
C:\_program files (x86)\_DLL-Files.com
လူဆိုးကောင်လေး January 23, 2013 at 9:41 AM
Run as administrator နဲ့ Patch လိုက်တာအဆင်ပြေသွားပါပြီ .. ကျေးဇူးပါပဲ ကိုနေ
လူဆိုးကောင်လေး January 23, 2013 at 9:42 AM
maungmaung123 February 24, 2013 at 6:24 PM
Run as administrator နဲ့ Patch ကို Run လိုက်မှပဲ အဆင်ပြေသွားတယ် ကျေးဇူးပဲဗျိုး ကိုလူဆိုးကောင်လေး နဲ့ ကိုနေမင်းမောင်ရေ..
Hey I am sо excited I founԁ your ωebsіte, I reаlly found you by mіѕtake, whilе
I was searсhing on Askjeeve for ѕomething else, Anyways I
am hегe nοw and would juѕt liκe
tο say manу thanks foramaгvelouѕ ρost
anԁaall round еntertаіning blog (I аlso love the
theme/design), I don’t have timе to read through it all
at the minute but I have saved it аnd alsо аԁԁeԁ
іn your RЅS feeds, so when I have time I
wіll be bасk to read more, Please do keep uρ the fаntаstic b.
Also visit my ωеbpage - optimal hcg
It's genuinely very complicated in this busy life to listen news on TV, so I just use web for that reason, and take the most recent news.
my web-site :: hcg diet results
my webpage: hcg lose weight
Anonymous March 18, 2013 at 4:46 AM
Stunning quеѕt therе. Whаt occurred afteг?
Hегe iѕ my blοg - pacquiao steroids
handy men September 19, 2013 at 1:59 PM
အချိန်၊ငွေ နဲ့ လုပ်အား ရင်းပြီးရှာထားတဲ့ အသိ နဲ့ တွေ့ရှိထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေပေးသောစေတနာကြောင့် တူသောကောင်းကြိုးချမ်းသာရနိုင်ပါစေ။
kyaw thu hlaing November 13, 2013 at 2:42 PM
ဆရာ patch တာမှာ expire ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြနေတယ် . . .
aboshady May 29, 2016 at 2:08 AM
File too large for the Destination file system Err...
Windows script host error message အားဖြေရှင်းရန်
Mac Tips Tricks Apps & Hacks Volume 2
ArcSoft Album Maker 4.3
Google Earth Pro 7.0.2.8415 Final Full Version
Wireless and Mobile Network Security, Security Bas...
Windows 8 Secrets (Tips, tricks, treats, and secre...
BrainDistrict PaintSupreme v1.5
Reading (English for Academic Study)
KMSmicro Selection Edition v0.8 for Windows 7, 8 /...
Partition Assistant Home Edition 5.1.2 Portable
Advanced SystemCare Ultimate v6.0.8.289 Premium Ed...
PhotoStage Slideshow Producer Professional 2.17 P...
WPanorama 10.1.1 Build 1413 Portable